ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနမှ ကထိကဆရာ လှိုင်တင့် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း - Yangon Media Group
ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနမှ ကထိကဆရာ လှိုင်တင့် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်တုပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်ထောင်စုပြဿနာလည်း မဟုတ်ဘူး ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဿနာလို့ပဲ မြင်တယ်
ကယား ပြည်နယ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တုအား ဒေသခံပြည်သူများ၏ သဘောဆန္ဒ ရယူမှု မရှိဘဲ စိုက်ထူခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ကရင်နီလူငယ်များက ဦးဆောင်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများရှိခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေသည် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆီသို့ လျှောက်လှမ်း နေချိန်တွင် မည်ကဲ့သို့ ရိုက်ခတ်နိုင်သည်ဆိုသည့် အ ကြောင်း အရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန(IR)မှ ကထိက ဆရာလှိုင်တင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ထားပါသည်။
ပထမဦးဆုံးပေါ့။ ကယားမှာဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြေး ရုပ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ ဒီအခြေအနေ တွေအပေါ် ဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ရနိုင်မလဲ ဆရာ။
အခုလက်ရှိ ကယားမှာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုကို ကန့်ကွက်တဲ့လူနဲ့ ထောက်ခံတဲ့လူနဲ့ ဖြစ်ကြတယ်။ အဓိကပြောချင်တာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုကို ဘာရည် ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တာလဲ။ ဒါကို အရင်ဆုံး ဆန်းစစ်ကြည့်ရ မှာပေါ့။ နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ ဒီလိုမျိုးအမှတ်တရ ရုပ်တုတွေ စိုက်ထူကြတာ အလေးထားတာတွေရှိတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်လို့ပြောလိုက်ရင် လေဘာတီရုပ်တုကြီး ကို ပြေးမြင်တယ်။ ဒါကိုမြင်တာနဲ့တင် အမေရိကန်လို့တန်းပြီးပြောနိုင်တာပဲ။ လေဘာတီ ရုပ်တုကြီးကလည်း အမေရိကန် Constitution ကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ လွတ် လပ်မှုနဲ့ တရားမျှတမှုကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ ရုပ်တုပေါ့။
အီဂျစ်မှာဆိုရင်လည်း ရှေးဟောင်းဖာရိုဘုရင်တွေရဲ့ ဂူသင်္ချိုင်းတွေကို အစွဲပြုပြီးတော့ အမှတ်ရချင်လို့ သူတို့ ဒါ တွေကို လုပ်တယ်။ နောက်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ရှိ တာပဲ။ ဂရိမှာဆိုရင်လည်း ရိုတင်ဆိုတဲ့ အတွေးသမားရဲ့ ရုပ်တု သိပ်ကိုကမ္ဘာကျော်တယ်။ ဒါတွေက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ကြတဲ့ကိစ္စ။ ဒီမြန်မာပြည်မှာလည်း အလားတူပဲ။ တော် လှန်ရေးပန်းခြံထဲမှာလည်း ရှိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံထဲမှာ လည်း ရှိတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနဲ့တကွ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးသမိုင်းကို အမှတ်ရစေချင်လို့လုပ်တဲ့ ရည် ရွယ်ချက်ပေါ့။
နောက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ တော်တော်များများမှာ လုပ်တဲ့ ရုပ်တုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာက သူက State of Unity လို့ သုံးတယ်။ ဆိုလိုတာက ဒီရုပ်တုတွေကို မြင် လိုက်တာနဲ့ ညီညွတ်မှုအား စည်းလုံးမှုပိုပြီးတော့ ကောင်း စေတယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ပထမဆုံး စပြီးလုပ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ရုပ်တုက အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်တုဆိုတဲ့ နောက်မှာ တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုဆို တဲ့ ခွန်အားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံး စုစည်းညီညွတ် တယ်ဆိုတဲ့ စည်းလုံးမှု အဲဒါတွေပါတယ်။ ဒါ ၄၇ စိတ်ဓာတ် ပေါ့။ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပေါ့။
အဲဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စိုက်ထူ တာမျိုးဆိုရင်တော့ ဘယ်နေရာမှာပဲစိုက်ထူစိုက်ထူ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ဒါ လက်ခံလို့ရတယ်။ ကယားပြည်နယ်မှာလဲ အလားတူပဲ ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ လုပ်တာဆိုရင်တော့ လက်ခံလို့ရပါတယ်။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ နည်းနည်း ပြန်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်လို့ မြင်တယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLD ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ ပြောဆို ထားမှုအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဆရာ။
တကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုစိုက်ထူခြင်းဟာ NLD ပါတီအနေနဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပတ်သက်မှုမရှိသင့်ဘူး။ ဒါပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ပြောချင်တယ်။ ဘယ်လိုနည်း နဲ့မှ ပတ်သက်မှုမရှိသင့်ဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ပိုပြီးတော့ မရှိသင့်ဘူးပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီးတော့မှ မဖြစ်သင့်ဘူး။ဒါကို NLD ပါတီဝင်တွေရော၊ NLD ပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကရောသတိထားဖို့လိုမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရင်စစ်အစိုးရလက်ကနေပြီး တစ်လျှောက်လုံးပေါ့ ဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင် အခွေဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကို ပြည်သူ့သဘော ထားတို့ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်လေးရပ်တို့ စသည်ဖြင့် ဒါတွေ တောက်လျှောက်ပြောလာတာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့မူဝါဒကို ပြည်သူလူထုလက်ခံ လာအောင် သွတ်သွင်းတာပေါ့။ သွတ်သွင်းတဲ့နည်းလမ်း။ အခု ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်း အဲဒီလိုမျိုး သွတ်သွင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် လျှော့သင့်တယ်။ မပတ်သက်ဖို့ကောင်းတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး သွတ်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး တိုင်းရင်းသားတွေဆီကနေ မမြင်စေချင်ဘူး။ အခုဖြစ်သွားတာက အဲဒီလိုသွတ်သွင်း တယ်လိုမျိုး မြင်သွားတာပေါ့။
နောက်တစ်ချက်က လူငယ်တွေအနေနဲ့ ရုပ်တုကိုပြန်ဖြုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလာတယ်။ ဒီအပေါ်မှာရော သူတို့တွေက ဘာကြောင့် တောက်လျှောက် တောင်းဆိုနေတာလဲလို့မြင်လဲ။
လက်ရှိမှာက ကန့်ကွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ ထောက် ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်။ နှစ်ပိုင်းပေါ့။ ကန့်ကွက်တဲ့လူတွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့က ရှေ့မှာပြောသလို ဗိုလ် ချုပ်ရုပ်တုကို ကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်တယ်။ သူတို့ကန့်ကွက်နေတာက အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းမှုကို ကန့်ကွက်တာ။ ဒီလိုမြင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုကိုကန့်ကွက် တာ မဟုတ်ဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းသည် ကန့်ကွက်စရာ မရှိဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုသည် အငြင်းပွားစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ သို့သော် သူတို့ ကန့် ကွက်နေတာက အတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းမှုကို ကန့်ကွက် နေတာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါ သူတို့အဖွဲ့ကလည်း အဲဒီလိုပြော ထားတာ ရှိတယ်။ သို့သော် ဒီမှာတော့ ပြောထားတယ်။ ကန့်ကွက်တဲ့လူက ၁ဝဝ လောက်ပဲရှိတယ်။ ထောက်ခံတဲ့ လူက ၂ဝဝ လောက်ရှိတယ်။ အပြန်အလှန်ပြောတာတွေ ရှိတယ်။ ဆိုတော့ ဒါက အရေအတွက်က ပြဿနာမဟုတ် ဘူး။ ကန့်ကွက်ခြင်း၊ ထောက်ခံခြင်းမှာ အရေအတွက်က များအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။
ဘာကို ကန့်ကွက်တာလဲနဲ့ ဘာကြောင့် ကန့်ကွက်တာလဲ ဆိုတာ၊ ဘာကို ထောက်ခံတာလဲဆိုတာနဲ့ ဘာကြောင့် ထောက်ခံတာလဲဆိုတာကိုပဲ ကျွန်တော်တို့က အဓိကအာရုံ စိုက်တယ်။ သူတို့ကန့်ကွက်တာက အောင်ဆန်းကို ကန့် ကွက်တာ မဟုတ်ဘူး။ အတင်းအဓမ္မသွတ်သွင်းမှုကို ကန့် ကွက်တာ။ ထောက်ခံတဲ့လူတွေကရော ဘာကိုထောက်ခံ ချင်တာလဲ၊ ဘာကြောင့် ထောက်ခံရတာလဲ။ ကန့်ကွက်ခြင်း၊ ထောက်ခံခြင်းကတော့ ရှိမှာပဲ။ အနည်းစုကတော့ ဒီဘက် မှာ ပြောနေတာက ကန့်ကွက်တဲ့လူကနည်းတယ်။ ထောက် ခံတဲ့လူက များတယ်ပေါ့။ အရေအတွက်သည် အဓိက မကျပါဘူး။
သို့သော် ၁ဝဝ ကပဲ ကန့်ကွက်ကန့်ကွက်၊ တစ် ယောက်ကပဲ ကန့်ကွက်ကန့်ကွက် ကန့်ကွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒါသည် အလေးထားရမယ့်ကိစ္စလို့မြင်တယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ ဒါသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်မို့လို့။ ဒီမိုကရေစီစနစ် မှာက တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့သဘောဆန္ဒကိုပါ Individual Right ပေါ့။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန် ဝတ္တရားကို အလေးထားတဲ့စနစ်။ မြတ်စွာဘုရားတောင် တစ်ယောက်တည်းက ကန့်ကွက်ရင်တောင် တစ်ဦးတစ် ယောက်ချင်းစီရဲ့ သဘောထားကို မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် အလေးထားခဲ့ဖူးတာရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရမှာလည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ဆန္ဒ၊ လူနည်းစု ရဲ့ဆန္ဒကို ပစ်ပယ်လို့မရဘူး။ အလေးထားသင့်တယ်။ ဒါ လေးတော့ ပြောချင်တယ်။
ရုပ်တုမလိုဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကတိစကားပဲလိုတယ် ပြောကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကတိစကားလို့ပြောရင် ၄၇ ပင်လုံက ဆက်စပ်နေတယ်။ ပင်လုံကတိကဝတ်တွေ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့ကိုရော ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုတွေပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်လဲ။
အဓိကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုက ပြဿ နာမဟုတ်ဘူး။ ကတိစကားက ပြဿနာပေါ့။ ဆိုတော့ ဒီအပိုင်းမှာလည်း ကန့်ကွက်တဲ့လူ တွေက ဘာကိုကန့်ကွက်တာလဲ၊ ဘာကြောင့် ကန့်ကွက်တာလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာပေါ့။ သူတို့ ကန့်ကွက်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်က အတင်း အဓမ္မသွတ်သွင်းမှုကို ကန့်ကွက်တာ မှန်တယ်။ သို့သော် သူတို့တောင်းဆိုမှုမှာက ၄၇ ပင်လုံ ကတိကဝတ်ကို ပြောကြပြီပေါ့။ ဆိုတော့ ဒါက ကျတော့ ရုပ်တုပေါ်မှာ ချဉ်းကပ်တာမျိုးမဟုတ် ဘဲနဲ့ ဒီရုပ်တုပြဿနာကို အခြေခံပြီးတော့မှ ဒါနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ လုပ်ဆောင်တာမျိုး ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ကန့်ကွက်တဲ့လူတွေဘက် က အဲလိုတောင်းဆိုချက်မျိုး ရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရုပ်တုစိုက်ထူခြင်း၊ မစိုက် ထူခြင်း ပြဿနာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ဒီရုပ်တု ပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့မှ နောက်တစ်ဆင့် တက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာ၊ နိုင်ငံရေးရည် ရွယ်ချက်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါက တစ်ပိုင်း ပေါ့။
တစ်ဖက်က ကရင်နီပြည်နယ်သမိုင်းကြောင်းတွေ ချပြတယ်။ လွတ်လပ်မှုကိုပြောတယ်။ တစ်ဖက်က ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်နေတယ်။ မျဉ်းပြိုင်လို ဖြစ်နေတဲ့ အဲဒီ့နှစ်ခုရဲ့ဆုံမှတ်က ဘာဖြစ်မလဲဆရာ။
အခုလက်ရှိ ပြည်ထောင်စုစနစ် ဖက် ဒရယ်စနစ်ကို သွားမယ်။ သွားဖို့ကြိုးစားနေ တယ်။ လက်ရှိ ခုနပြောတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ ၄၇ ပင်လုံကတိကဝတ်ပေါ့။ ပင်လုံကတိကဝတ် မှာ ဗိုလ်ချုပ်သည် အဲဒီအချိန်တုန်းက ဘာ ကြောင့် ဒီလိုကတိကဝတ်ပေးခဲ့လဲဆိုတာ အား လုံးသိပြီးသား ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အများစုက ဖက်ဒရယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ခွဲထွက်ခွင့်ကို တန်းပြီးမြင်တယ်။ အဲဒါ မှားတယ်။ ဖက်ဒရယ် ဆိုသည် ခွဲထွက်ခွင့်မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံး တန်းတူ ရည်တူရှိခွင့်၊ အပြန်အလှန်လေးစားခွင့်၊ တူ ညီသောအခွင့်အရေး၊ တူညီသောရပိုင်ခွင့်ပဲ။ ဒါ ဖက်ဒရယ်ပဲ။
ဥပမာ အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုမှာ ကြိုက်တဲ့ပြည်နယ်က တက်လာ တက်လာ ဘယ်ပါတီပဲ တက်လာတက်လာ ဘယ်သူပဲ သမ္မတလုပ်လုပ်။ ပြဿနာ ဘာမှ မရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သူက According to Constitution ပေါ့။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်း ပဲ လုပ်ရတယ်။ ကြိုက်တဲ့ပါတီလာ။ ရီပတ် ဘလီကင်ပဲ လာလာ၊ ဒီမိုကရက်ပဲ လာလာ။ အဲဒီသမ္မတ အဲဒီအစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအတိုင်းပဲ လုပ်ရတယ်။ ဒါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဖက်ဒရယ်ပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာလည်း အလားတူပဲ။ ဖက်ဒရယ် လို့ ပြောလိုက်ရင် ဝါဒဖြန့်ချိထားတာတစ်ခုက မှိုင်းတိုက်ထားတာတစ်ခုက ဖက်ဒရယ်သည် ခွဲထွက်ခွင့်လို့ မြင်နေတယ်။ ဒါ မဟုတ်ဘူး။ အဓိကက တန်းတူရည်တူရှိခွင့်။ တူညီတဲ့ အခွင့်အလမ်း၊ တူညီတဲ့ စီးပွားရေးအခွင့်အ လမ်း၊ နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်း ဒါတွေပဲ။
According to Constitution ဖြစ်ဖို့ ဘယ်ပြည်နယ် ကပဲ တက်လာတက်လာ ဘယ်တိုင်းရင်းသား ကပဲ အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်၊ အစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီမှာ ပြဿနာက ဘာလဲဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ အားကောင်းဖို့လိုတယ်။ ခိုင်မာဖို့လို တယ်။ အဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ညီ ညွတ်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်နဲ့ ညီညွတ်သော အခြေခံဥပဒေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ အခု ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းရုပ်တုပြဿနာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ခုန ပြည်ထောင်စုပြဿနာလည်း မဟုတ်ဘူး။လက်ရှိမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပြည် ထောင်စုစနစ်ကို အာမခံချက် အပြည့်အဝ မပေးဘူးဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကြောင့်ဖြစ်တာ။
အဲဒီ အမြင်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ။ ဆိုလိုတာက တော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဿနာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
ဆက်စပ်ပြီးတော့ ဒီဟာကလည်း အစကတည်းကနေ ကန့် ကွက်မှုတွေ ရှိထားတယ်။ အဲဒီကနေစပြီးတော့ တဖြည်း ဖြည်းနဲ့ ကန့်ကွက်မှုက အရှိန်မြင့်လာတယ်။ အဲဒါကိုမှ ဆက်လုပ်ကြတယ်။ ဒီအခြေအနေထိရောက်ခဲ့တာ ဘာ ကြောင့်လို့ထင်လဲ။
စပြီးတော့အစီအစဉ်ဆွဲကတည်းက ကန့် ကွက်တဲ့လူတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီကတည်းက ဒီဘက်က လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ ကော်မတီဘက် က စဉ်းစားရမယ်။ ပြီးရင် အကျေအလည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုလုပ်ရမယ်။ ပြီးမှ လုပ်မယ် မလုပ်ဘူးဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ သို့သော် ဖြစ် သွားတာက ကန့်ကွက်တဲ့လူရှိပေမယ့် ဆက် ပြီးတော့ လုပ်ခဲ့တယ်။ အခု ဒေါက်တာမျိုးညွန့် က ပြောလိုက်တာ တစ်ခုကြားတယ်။ သဘော တူညီချက်ရပြီပေါ့။ ဆက်ထားမထားဆိုတဲ့ဟာ ကို ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့။ သူက လုပ်ပြီးမှ ဆွေး နွေးတာ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါ မှားတယ်။ ရုပ်တု ကြီး လုပ်ပြီးသွားတယ်။ ဇွတ်အတင်းကြီးလုပ် သွားတယ်။ ပြီးသွားမှ ဒါကြီးကို ထားသင့် မထားသင့်၊ ရွှေ့သင့်မရွှေ့သင့် ဆွေးနွေးတယ် ဆိုတာ အဲဒါတော်တော်ကို ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ပဲလို့ ပြောလို့ရတယ်။ အစ ကတည်းက ကန့်ကွက်သူတွေရဲ့သဘောထား၊ ထောက်ခံသူတွေရဲ့သဘောထားကို အလေး ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ ဒီပြဿနာမဖြစ်ဘူး။
လက်ရှိအချိန်မှာ အစိုးရအနေနဲ့ရော ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာ ဆရာ့အမြင်လေး ပြောပြပေးပါ။
အခုကကျတော့ ပြောဖို့ရာ ခက်သွားပြီ။ ဟုတ်ပြီ ရွှေ့ပေးဖို့ အများစုကဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဒါကြီးကို ပြန်ရွှေ့ပေးရမယ်ဆိုတော့လည်း နိုင်ငံရေးအရ သိက္ခာကျဦးမယ်။ နေရင်းထိုင် ရင်း ဗိုလ်ချုပ်လည်း တန်ဖိုးလျော့တယ်ဆိုတော့ အတော်ကို ဒီဟာက ပြောရခက်တဲ့ကိစ္စဖြစ် သွားပြီ။ တစ်ခုပဲ ဒါမျိုးနောက်ဘယ်နေရာမှာမှ ထပ်ပြီးမဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်။ ဒါအရေးကြီးဆုံး ပဲ။ ဒါမျိုးထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် တိုင်းရင်း သားတွေနဲ့ အစိုးရနဲ့ကြားမှာ ကွာဟချက်ပိုကြီး သွားမယ်လို့ မြင်တယ်။
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုချဉ်းကပ်ဖို့အတွက် လူငယ်တွေဘက်က ဘာတွေသိထားသင့်လဲ။
ပင်လုံရဲ့ ကတိကဝတ်ပေါ့။ တိုင်းပြည်က ၁ဝ နှစ်ကြာရင် ခင်ဗျားတို့မကြိုက်ရင် ခွဲထွက် ဆိုတဲ့ဟာပေါ့။ တကယ့်တကယ်တမ်းက ဘယ် တိုင်းရင်းသားမှ ခွဲမထွက်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်ရဲ Geo Politic ပေါ့။ ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်၊ ဘယ်ပြည်နယ်မှ ခွဲထွက်ပြီး ရပ်တည်လို့ရတဲ့ အနေအထားမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါက ကျွန်တော် က သိပ်မစိုးရိမ်ဘူး။ တစ်ခုပဲ ပင်လုံကတိကဝတ် သည် တန်းတူညီတူရှိမှုကို အာမခံချက်ပေး နိုင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်။ အဲဒါသွားဖို့ လက်ရှိ ကရင်နီလူငယ်တွေအနေနဲ့ သူတို့အနေနဲ့ ဒီ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုစနစ်ကို လိုလားတယ် ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က ဖက်ဒရယ် စိတ်ဓာတ်နဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို ချဉ်း ကပ်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကို ချဉ်းကပ် ဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ အကြံပေးချင်တယ်။
ခုနပြောသလို ကမ္ဘာမှာလည်း ဒီလိုရုပ်တု တွေ အများကြီးထုကြတယ်။ ဒါ Land Mark အမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့။ တစ်ခုပဲ။ တရုတ်မှာ ဆို မော်စီတုန်းရှိမယ်။ ဗီယက်နမ်မှာဆို ဟို ချီမင်း ရှိမယ်။ ဖိလစ်ပင်းဆိုရင် ဒေါက်တာ ဟိုဆေးရီဇော်ရှိမယ်။ အိန္ဒိယဆိုရင် ဂန္ဓီရှိမယ်။ ဒါတွေက နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဆိုပြီးတော့ မှ သတ်မှတ်ထားတာ။ မြန်မာပြည်မှာလည်း အလားတူပဲ။ တစ်ခုရှိတာက အားလုံးနားလည် ဖို့လိုတာက တကယ်တမ်းပြောရင် မြန်မာ့လွတ် လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တစ်ယောက်တည်း တိုက်ခဲ့တာတော့ မဟုတ် ဘူး။
နောက်တစ်ခုက တောင်သူလယ်သမား အရေးမှာလည်း ဆရာစံတစ်ယောက်တည်း တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ နောက် အလုပ်သမားအရေး ရေနံမြေသပိတ်မှာလည်း သခင်ဖိုးလှကြီးတစ်ယောက်တည်း ချီတက်ခဲ့ တာ မဟုတ်ဘူး။ နောက် ရှစ်လေးလုံးအရေး တော်ပုံကြီးကို မင်းကိုနိုင် တစ်ယောက်တည်း တော်လှန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ အားလုံးပါဝင် တယ်ပေါ့။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ အမျိုး သားလွတ်မြောက်ရေးသမိုင်းကို တန်းမြင်တာ ပဲ။ ဆရာစံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ တောင်သူလယ် သမားအရေးကို တန်းမြင်တာပဲ။ သခင်ဖိုးလှ ကြီးလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ကို အလုပ်သမားအရေး ရေနံမြေသပိတ်ကို တန်းမြင်တာပဲ။ အဲဒီတော့ မင်းကိုနိုင်လို့ပြောတာနဲ့ ရှစ်လေးလုံးကို တန်း မြင်တာပဲ။ ပြောချင်တာက သူတို့တွေ တစ် ယောက်တည်း တစ်ဦးတည်း တိုက်ခဲ့တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့သည်ပင်လျှင် ဒီ တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ တော်လှန်ရေး နဲ့ ခွဲခြားမရသော တော်လှန်ရေးရဲ့ဝိညာဉ်တွေ ဖြစ်နေတယ်။
တကယ့်အထိမ်းအမှတ်ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ဒေါက်တာ ဟိုဆေးရီဇော်လို့ပြောလိုက်ရင် ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ကိုလိုနီခေတ်ကို တန်းမြင်သလိုပဲ မြန်မာပြည် မှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို့ပြောလိုက် ရင် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းကို တန်း မြင်တယ်။ ဒါက လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေ အနေပေါ်မှာ အားလုံးမြင်ဖို့လိုတဲ့ကိစ္စပေါ့။ ဒါကိုခွဲခြားလို့မရတဲ့ကိစ္စ။ ဒါကိုသတိပြုဖို့တော့ လိုတယ်။ သို့သော်လည်း အောင်ဆန်းသည် ပြစားစရာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုပြောလိုက်တာက အောင်ဆန်းသည် အရင်အစိုးရလက်ထက်က ပြည်သူ့သဘောထားတို့လို၊ နိုင်ငံရေးဦးတည် ချက်၊ စီးပွားရေးဦးတည်ချက်တို့လိုမျိုး အတင်း အဓမ္မ သွတ်သွင်းစရာမလိုဘူး။
ပြောချင်တာ က အောင်ဆန်းရုပ်တုများသည်လည်းကောင်း၊ အောင်ဆန်းသည်လည်းကောင်း အငြင်းပွား စရာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ပြဿနာ ဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူး။ ဒါသည် အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းစရာမလိုဘူး။ လူထုရင်ထဲမှာ ရှိပြီး သား။ အဲဒီရှိပြီးသားကို ထပ်ပြီးတော့မှ အတင်း အဓမ္မသွတ်သွင်းရင် ရှိပြီးသားပျက်သွားလိမ့် မယ်။ ဒါလေးတော့ ဖြည့်ပြီးပြောချင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေကော ထောက်ခံတဲ့သူတွေရော ဗိုလ်ချုပ်ကို တန်ဖိုး ကျအောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်တယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် လူပေါင်းထောင်သောင်းချီ၍ ဂျူးလူမျိုးရေးဝါဒ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို က
ခြေဥပြင်ဆင်ရေးကော်မတီတွင် ၄၅ ဦးစုံမှ လုပ်ငန်းစတင်ရမည်ဆိုသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက် မပါသည့်အတွက် တ??
တာချီလိတ်မြို့ ဝမ်မိုင်ရွာ မြို့ရှောင်လမ်းအနီး မြောင်းတူးဖော်စဉ် ဗုံးသီးအဟောင်း တစ်လုံးေ?
မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်အတွင်းရှိ လယ်ကွင်းထဲမှ တဲနှစ်လုံးကို အနီရောင်ဝတ် အရပ်သားများ လာရောက် ဖယ်??